भोकका कारण कं’कालजस्तै भइसकेका ७ व*र्षका बा*लक ग’म्भीर अ’वस्थामा भेटिएपछि ! – Onlines Time
March 10, 2021 onlinestimeLeaveaComment on भोकका कारण कं’कालजस्तै भइसकेका ७ व*र्षका बा*लक ग’म्भीर अ’वस्थामा भेटिएपछि !
भोक’का का’रण कं’काल’जस्तै भ’इसकेका ७ वर्षका एक बालकको भ’या’व’ह तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । यमनका यी बालकको नाम फैयद समीम हो । प्यारालाइसिस र ग’म्भीर कुपोषण’को शि’कार भएका समीम’को तौल केवल ७ किलो छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार समीमको हा’लत नि’कै ग’म्भीर भ’इसकेको थि’यो र मुस्किल’ले उन’को ज्या’न ब’चाउन स’कियो । अहिले उनलाई यमनको राजधानी साना ल्याइएको छ जहाँ एक अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ । अल शबीन अस्पताल’को कु’पोषण वार्डका सुपरभाइजर डा. रागेह मोहम्मदका अनुसार समीमलाई अस्पताल ल्याउँदा उन’को ज्या’न जा’नै लागे’को थि’यो ।
समीमको उपचारको लागि उनको परिवारसँग पैसा पनि छैन । उनको परिवार उपचारको लागि दान’मा नि’र्भर छ । स्थानीय अस्पतालका डाक्टरले देशमा कु’पोषित बालबालिकाको संख्या बढिरहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनले विश्व’कै ठूलो मा’नवी’य संकट’को साम’ना गरिरहेको बताएको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***